[GIMP] Vokatry ny sticker | Avy amin'ny Linux
[GIMP] effet sticker
helena_ryuu | | Fisehoana / personalization, famolavolana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Ity dia torolàlana kely izay hanampy antsika hamorona sticker na zava-misy sticker izay azo ampiasaina, amin'ity indray mitoraka ity no hampiasaiko ity sary ity.
Ity Effect ity dia azo ampiharina amin'ny sary rehetra, raha mbola manomana azy tsara isika.
Mba hanaovana an'ity fanomanana ity dia tsy maintsy esorintsika aloha ny sary aorina na atokàny ny sary amin'ny mangarahara. Ity dia ambaratonga iray tena fototra amin'ny fampiasana ny GIMP, fa raha tsy misy mahalala, dia atao amin'ny fomba manaraka.
Miaraka amin'ny sary voafantina dia hataonay sosona > mangarahara > ampio fantsona alpha
Ao amin'ny fizarana fitaovana ampiasainay fuzzy fifantenana ary mifidy ny faritra manodidina ny kendrena izahay
Efa voafantina ny faritra manodidina, tsindrio fotsiny ny «hamafa» amin'ny klavinay ary efa manana ambangovangony mangarahara isika, raha misy ny tsy fahalavorariana, dia hampiasa ilay hamafana izahay mba hamaranana tsara.
Vantany vao nanomboka niasa tamin'ny effet sticker izahay dia nankany fifantenana > vola mifidy ilay zavatra
Hitodika any isika izao Selección > Hitombo [hitombo]
izay homenay ny sanda sahaza indrindra aminay, satria io sanda io dia mametraka ny contour hananan'ny sary, amin'ity tranga ity dia 6
Handeha isika Selección > Route (manome safidy tsara kokoa amin'ny sisiny ity)
ary avy eo amin'ny menio iray ihany Làlana fanombohana
Amin'ity faritra ity dia mifidy ny lokon'ny sisintany isika, (fotsy) nanao an'io dia alehantsika Ovay > Soritry ny zotra
Averina indray, ireo sanda ireo dia fiasan'ny haben'ny sary, ary izany dia tsy maintsy ampitahaina amin'ny hatevin'ny sisin-tany tadiavina, amin'ity tranga ity dia hametraka 15 aho, (raha amin'ny Enlarge [Grow] no ampiasainao fa tsy 6 12, eto dia azonao ampiasaina 30 fa tsy 15 sns.)
Amin'izao fotoana izao dia manana ny sary vonona isika, saingy afaka manampy aloka hanome azy ny vokany 3D isika, (izay hahatonga azy io ho mangatsiatsiaka kokoa; D) ataontsika izany amin'ny alàlan'ny vokatry > Jiro sy aloka > Alokaloka ary mampiasa ny sanda default.
Toy izao ny vokany:
Homura-chan sticker ianao! へ (> w <) ノ
Aza adino ny mitahiry azy amin'ny png ary manantena aho fa nankafizinao ity lesona kely ity. (^ _ ^) ノ
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » [GIMP] effet sticker
WOW !!! Mahafinaritra 😀
Hoy aho, tsara fotsiny 😀
Amin'izay aho dia mianatra kely momba ny Gimp * - *
Misaotra tamin'ny fandraisanao anjara ^ _ ^
tongasoa ianao, somary altruistic amin'ny fomba fanoratana lahatsoratra 😀
Tsy dia fantatro loatra ny famolavolana fa efa nijery betsaka an'i Krita sy ireo tombontsoa samihafa azony aho. Tokony hanandrana an'io programa io ianao hahitanao ny fandehany, fantatrao, andrana 😉
Eny, fantatro ny krita, toa feno sy misy endri-javatra mahaliana izy io, saingy mahamenatra ny mametraka programa tsy maintsy sintomiko daholo ny DE 🙁, angamba, mety hanana ekipa mendrika miaraka amina ram 8Gb aho indray andro any hampandeha ny KDE xDDD misaotra ho an'ny torohevitra
Raha ny fahalalako azy dia tsy ilaina izany, saingy tsy miraharaha an'io antsipiriany io aho ka tsy afaka miresaka momba anao xD
tsara lazaiko anao satria rehefa manao pacman -S aho dia mila mametraka ny KDE rehetra.
Tuto tena tsara .. Hataoko amin'ny fampiharana amin'ny fotoana fohy.
Tiako ny anime + gimp = mifangaro mahafinaritra 🙂
mazava ho azy !!
Toa mangatsiatsiaka be ny vokany ary mandeha amin'ny hazo ity iray ity, misaotra! :]
waaaaa miaraka amin'ny tutes anao ka hanohy hiady ho mpamorona sary maloto aho
Mpamorona miaraka amin'ny GIMP ... Hitako fa sarotra izany raha tsy te hiasa mafy amin'ny sehatry ny nomerika ianao.
Amin'izao fotoana izao dia mizaha toetra an'ity sy ny tutorial anao hafa aho ary raha tena miasa xD
+10 isa bonus amin'ny fampiasana Homura ~
Faly aho fa sahy mampiasa gimp ^ _ ^
hahahaha misaotra an'ny sofin'ilay bandy +10
Mpankafy an'i HomuHomu * w * aho
Salama maraina, misaotra!
Misaotra betsaka anao amin'ny lesona, raha indray andro aho dia sahy manome fotoana hafa an'i Gimp amin'ny fiainako.
Hametraka gimp aho, hijerena raha mahavita azy 🙂
sudo aptitude mametraka gimp
pacman -s mametraka gimp
tsy sarotra izany XD
Nooooooo xD, te-hiteny aho, andao jerena raha afaka manao izay lazain'ny lesona xD aho
Misaotra tamin'ny tutorial. Vao hitanao tamiko hoe inona ilay "làlan-dian-tongotra", tsy mbola nanandrana azy aho.
Ny zavatra tsara indrindra amin'ity programa ity dia ny fananany ny zava-drehetra ary afaka miasa amin'ny fomba maro samihafa ianao ... azonao atao koa ny:
1- Eo amin'ny sosona (efa tapaka) tsindrio ny bokotra mifanohitra ary safidio ny «alpha to select».
2- Tsindrio Ctrl sy + ianao, manondro isa amin'ny pixel izahay, manaiky izahay.
3- sosona vaovao, tarihintsika ny loko sisin-tany ao anatin'ny fifantenana, ampidinintsika mankany ambadika ny sosona,
4- ary mamorona ny aloka: Menu / filters / jiro sy aloka / aloka ...
Eny, tena Gimp tokoa no be mpampiasa sy feno fiasa, ny fomba anaovanao azy dia mahaliana sy azo ampiharina ihany koa, fa te hampiasa ireo fiasa efa tafiditra aho, mety ho fako ny tsy mampiasa azy ireo marina? 😀
Andao hojerentsika raha azoko….
Ny effet sticker dia misy ny maka sary ary manao azy ho toy ny sticker, sa tsy izany?
Tsy hitovy izany:
- Avereno (esory na esory ny sary avy amin'ny tontolo iainany)
- Ataovy avo roa heny ny sosona vita farany
- Fenoy mainty ny sosona ambany
- Ahena ny opacity an'ilay sosona feno mainty hahatonga azy ho aloka
- Afindrao kely ilay sosona mainty
Azafady, aza raisina aho fa ny hendry niampita dia mitady vahaolana hafa hahatratrarana ny valiny mitovy tsara be izay.
Saika hanome torolàlana azy ireo aho hahazoana vokatra mitovy amin'izany amin'ny fanaovana dingana hafa
dia hoe tsotra be ve izany ka tratrarina amin'ny sitrakao hahahahaha tsy heveriko ho hendry ianao, fa be dia be ny olona sy ny fomba fijery an'izao tontolo izao ho fomba hahatratrarana zavatra amin'ny fiainana.
fihobiana ^ _ ^
Misaotra helena_ryuu, anio dia hampiasa ny vokatra Sticker ho an'ny marika 🙂
Toy ny mahazatra, helena_ryuu, manao ny tutorial GIMP tena tsara 🙂 Misaotra betsaka.
Manoro hevitra anao aho hijery ny Gazety Gimp, ao no hahitanao ny asa vita amin'ny Gimp sy ny plugins ao aminy ary koa ny tutorial (amin'ny teny Anglisy), avy amin'ireo mpampiasa efa mandroso amin'ny famolavolana sary.
Tsara! Misaotra betsaka anao amin'ny lesona. Isaky ny tiako matetika ny milalao amin'ny GIMP, dia manana fika vaovao hanandramana 😀 aho izao
Fetsy tena tsara, rahateo, nivoaka ny # 2 amin'ny magazine gimp. mahafaly
marian436 dia hoy izy:
misaotra an'ity tutorial ity fa amin'ny gimp 2.8 ny dingana farany antsoina hoe cast shadow dia tsy miseho ... ahoana ny fomba anaovana an'io raha mahazo ilay aloka ??? Vonjeo "!
Mamaly an'i marian436
LOL dia hoy izy:
Salama, tonga ny troll XD ...
Ho ela velona ny Layer Styles !!!!! XD
Mazava ho azy fa afaka miaina tsy misy azy ireo isika, raha ny tena marina, ny hany tadiaviko ao amin'ny GIMP dia tsy ny effets layer, na ny zavatra marani-tsaina, fa tonian-dahatsoratra gradient mahomby kokoa
Ny ankamaroan'ny vakiana amin'ny Andao hampiasa Linux: Novambra 2012
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny Grub 2 nefa tsy mampiasa cd mivantana